भदौ १ गतेदेखि उडान सुरु हुन्छ-हुँदैन ? देशव्यापी लकडाउन होला ? : यस्तो छ सञ्चारमन्त्रीको जवाफ जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
शनिवार ३ असोज, २०७७ | Saturday, September 19th, 2020
भदौ १ गतेदेखि उडान सुरु हुन्छ-हुँदैन ? देशव्यापी लकडाउन होला ? : यस्तो छ सञ्चारमन्त्रीको जवाफ
शुक्रबार २३ साउन, २०७७
बीबीसी । दुई साता अगाडि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भदौ १ गतेदेखि आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान पुन:सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको भएतापनि त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुने स्थिति देखानपरेको बिहीवार सरकारका प्रवक्ताले बताएका छन्। “जोखिम बढ्दैछ त्यसैले सार्वजनिक यातायात वा अत्यावश्यक बाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय उडान तथा आन्तरिक उडान खोलिनहालौँ भन्ने आवाज आइरहेका छन्। हामी केही दिनभित्र कोरोनाभाइरस सङ्कट व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर यी विषयको समीक्षा गर्छौँ,” सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री युवराज खतिवडाले भने।
‘उदार हुन नसकिने’
पछिल्ला दिनमा बढेको जोखिमका कारण सरकारका सामु उदार भएर सेवा सञ्चालन गराउने अवस्था देखानपरेको मन्त्री खतिवडाले बताएका छन्। उनले विगत केही सातायता विभिन्न देशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूको उद्धार गरिएको उल्लेख गरे। सुरुमा केही हजारभन्दाभन्दै करिब ४५ हजारको त्यसरी उद्धार भइसकेको र अझै थप ४५ हजार आउन चाहनेको सूची विभिन्न दूतावासमा रहेको उनले बताए। “सरकारको सोच के हो भने जो अलपत्रै पर्नुभएको छ र जसको उद्धारै गर्नुपर्नेछ वहाँहरूलाई ल्याउँछौँ। तर जो केही समय त्यहाँ बस्दा सुरक्षित नै हुनुहुन्छ र अलपत्रको स्थितिमा हुनुहुन्न भने वहाँहरूलाई स्थिति अलि सहज भएपछि ल्याउनु पर्ने गरि हामी छलफलमा छौँ।”
देशव्यापी लकडाउन नहुने
चैत ११ गतेदेखि देशभरि लगाइएको लकडाउन भन्दा केही समय अगाडि देखि नै खासगरि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू बन्द भएका हुन्। देशव्यापी लकडाउन अहिले हटाइएको छ। जोखिम बढ्दै गएपछि कतै फेरि लागु हुने त होइन भन्ने प्रश्नको जबाफमा बिहीवार मन्त्री खतिवडाले अहिले सरकारले त्यस्तो नसोचेको बताए। आर्थिक स्वास्थ्य पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएकाले सबैजनाले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरिदिएमा असहज स्थिति नआउने उनले बताए।
साथै स्थानीय स्थिति हेरेर अहिलेपनि दुई दर्जनजति स्थानीय तहमा विभिन्न किसिमको लकडाउन लागु रहेको र आगामी दिनमा पनि परिस्थिति हेरेर स्थानीय निकायहरूले नै त्यस्ता कदम चाल्नसक्ने उनले बताए।
सबैको जानकारीका लागि सेयर गर्नुहोस !!
कोरोना विरुद्धको खोपलाई लिएर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले विश्वलाई दिए यस्तो खुःशीको खबर
शनिवार ३ असोज, २०७७
कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर आएको प्रधानमन्त्रीको बयान
प्रधानमन्त्री भन्छन : सरकारको पहिलो प्राथमिकता जनताको जीवन रक्षा हो [सम्बोधनको पूर्णपाठ]
कोरोनाको अवधिमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मैले पटकपटक औपचारिक सम्बोधन गरें
चितवनमा दुनियाँ रुवाउने घटना : ख्याल नगर्दा ३ जनाको मृत्यु ! [सचेत रहनुहोस्]
संविधानको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्न सबैलाई आग्रह ः नेता खनाल
आज बिहानको अविरल वर्षापछि खसेको पहिराले सडकखण्ड अवरुद्ध
गण्डकी प्रदेशमा १५ कोरोना सङ्क्रमित थपिए
प्राविधिक सीप सिकेर शुरु गरेको व्यवसायले बिर्साइदियो इराकको कमाइ
जन्मेदेखि मृत्युसम्मको संस्कार एउटै थलोमा
५ सय ८६ जनालाई विभिन्न मानपदवी, अलंकार र पदकद्वारा (तक्मा) विभूषित गरिने
न्यायपालिकाका काम कारवाही एवम् सुधारका प्रयासहरूप्रति विश्वस्त हुन प्रधानन्यायाधीशको आग्रह
‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ बनाउन सरकार अगाडि बढ्दै छः मुख्यमन्त्री राई
संविधानको मर्म र भावना व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न शेरचनको आह्वान
समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’का लागि संविधानको कार्यान्वयन र पालनमा लाग्नु सबै नेपालीको कर्तव्य
संविधानको मर्म र भावनलाई व्यवहारिक गर्न आ–आफ्नातर्फबाट इमान्दार प्रयास जारी राखौँ
नेपालको संविधान दिवसमा चीनसहित विश्वका यी २९ राष्ट्रले दिए शुभकामना सन्देश
संविधान नेपालका अग्रगामी परिवर्तन पक्षधर जनताको सङ्घर्ष र शहीदका बलिदानको प्रतिफल
संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा २८९ कैदीबन्दीको कैद माफीमिनाहा